Xiaomi Mi Band 2, saaxiibkaaga ugu fiican iPhone-ka [fiidiyow] | Waxaan ka socdaa mac
Xiaomi Mi Band 2, saaxiib kaaga kuugu fiican iPhone-ka [fiidiyow]
Applelised | | Gargaarka, Noticias
Shirkada caanka ah ee Shiinaha ayaa soo cusbooneysiisay jijimadeeda qiimaha jaban ee caan ku ah. Waxaan ka hadalnaa Xiaomi My Band 2, aalad la shaaciyey inay tahay saaxiibka ugu fiican ee iPhone-keena si loo qiyaaso wax kasta oo la xiriira dhaqdhaqaaqa jireed, cabbiro hurdadayada iyo xitaa inaan xafidno diiqadeena.
Maanta Applelizados waxaan ka dhigeynaa wax ka reeban oo waxaan ka hadleynaa Xiaomi My Band 2 Sababta oo ah, ka dib markii aan isticmaalay noockeedii hore sannad iyo badh, iyo ka dib markii aan sidoo kale u adeegsaday Apple Watch muddo hal sano ah, waxaan xaqiijin karaa inay tani tahay, ugu yaraan, mid ka mid ah qalabka ugu fiican ee aan iibsan karno si aan u isticmaalno wada jir ah illaa iPhone-ka.
Xiaomi Mi Band 2 | MUUQAAL: Powerplanetonline.com
La Xiaomi My Band 2 Waa boodbood tayo leh oo laga dheehan karo jiilkii ugu horreeyay ee this la gashado. Hada ku dar a Bandhig OLED iska caabin sare iyo isticmaal hooseeya taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan eegno dhammaan xogta diiwaangashan adigoo si fudud u taabanaya adiga badhanka taabashada. Sidan oo kale, mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee isticmaalka hadda waa inaan mar dambe loo baahnayn inaan furno barnaamijka My Fit si loo hubiyo masaafada aan soo marnay, talaabooyinka la qaaday, garaaca wadnaheena ama kalooriyada aan gubnay, maadaama aan gacanta ku heyno wax walba.
Intaa waxaa dheer, the Xiaomi My Band 2 ayaa hagaajiyay nidaamkaaga algorithm waana hadda sax ah markay timaado tirinta tillaabooyinka, cabirka waqtiga shaqada, iyo wixii la mid ah.
Iyo mid kale oo ka mid ah qodobbada waaweyn ee lagu qanco waa iyada iska caabin weyn. Isla marka aad soo qaadatid jijin waxaad ogaan doontaa in tani aysan ahayn "caag rakhiis ah"; waa raaxo leh, adkaysi leh, miisaankiisu waxba ma jiro oo leh qiimeyn caalami ah IP67, sidaa darteed u adkaysta boodhka, biyaha iyo dhididka.
Qaar ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee Xiaomi My Band 2 Waxay yihiin:
0.42 inji OLED shaashad ah
Dareemida garaaca wadnaha
Bixinta fiilada USB
Digniinta casriga ah
Taariikh data gasho
IP67 iska caabbinta biyaha iyo boodhka
Batariga: 70 mAh
Madax-bannaanida 20 maalmood
Miisaanka oo kaliya 7 g
La jaan qaada macruufka 7.0 ama ka sareeya iyo Android 4.4 ama ka sareeya
Furitaanka otomaatiga ah haddii aad isticmaasho mid ka mid ah moodooyinka casriga ah ee Xiaomi: waa la jaan qaadayaa.
Maxaan ku samayn karaa Xiaomi Mi Band 2?
La Mi Band 2 Waa qalab xiran oo si gaar ah ugu habboon cayaaraha xirfadleyda ah, hiwaayaddayaasha ama qof kasta oo doonaya inuu la socdo dhaqdhaqaaqa jirkooda oo uu hagaajiyo. Iyada waxaad ku sameyn kartaa:
Tiri tilaabooyinka la qaaday
Tiri masaafada safarka
Hadaf dejiso oo hel ogeysiis gariir markaad gaadho
Xakamee garaaca wadnahaaga
Tiri kalooriyada aad gubtay
Cabir wareegyada hurdadaada
La tasho dhammaan taariikhda xogtaada diiwaangashan
Deji qaylo-dhaan caqli-gal ah oo kugu soo toosin doona subax kasta hab horumar iyo dabiici ah
Ku hel ogeysiis gariir markaad heleyso wicitaan
Iyo waxaas oo dhan, adigoon iska bixin, maxaa yeelay waad la ordi kartaa, seexan kartaa, qubeysan kartaa xitaa waxaad tagi kartaa xeebta.
Haddii aad rabto jijin cabiran oo aan kugu adkeynaynin ogeysiisyo isdaba-joog ah, oo leh taxaddar aad u taxaddar badan oo xarrago leh, iska caabin sare, iyo qiimo ku dhowaad gorgortan ah, waxaan kugula talineynaa iibso Xiaomi Mi Band 2, hubaal inaadan ka qoomameyn doonin. Sidoo kale, haddii aad doorbideyso mid ka mid ah moodooyinkii hore shaashad la'aan, waxaad dooran kartaa Mi Band 1 ama Mi Band 1s hadda qiimo ka wanaagsan sidii hore.
Oo haddaba, waxaan kaaga tagayaa dib-u-eegista fiidiyowgan ee kanaalkayaga Applelised ee YouTube-ka. Ha iloobin inaad subscribe dhigto! 😘
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » Xiaomi Mi Band 2, saaxiib kaaga kuugu fiican iPhone-ka [fiidiyow]
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii garaaca wadnaha uu iswaafajinayo maahan codsiga Runtastic
Waad salaaman tahay Miguel. Waxaan u maleynayaa maahan. Dhammaan shaqooyinka Xiaomi Mi Band waxay la jaan qaadayaan barnaamijka Mi Fit laftiisa (dabcan) iyo barnaamijka caafimaadka ee iPhone-ka, iyagoo awood u leh inay arkaan dhammaan cabbiraadaha lagu cabiray jijirka halkaas. Laakiin waxaan u maleynayaa inaysan la jaan qaadi karin barnaamij kale sida Runtastic.
Jawaab Jose Alfocea
Waad salaaman tihiin, waxaan ku soo galay si kadis ah waana arkay aragtidaada. Waxaan kuu sheegayaa haddii ay suurtagal tahay, inaad ka soo dejiso codsi la yiraahdo my HR AppStore. Iyada oo lagu rakibay waxaad raacdaa talaabooyinka soo socda:
1.- waxaad socodsiineysaa Fitkeyga jijimadiisa si loogu waafajiyo mobilka
2.- in miHR waxaad dhaqaajineysaa heerka garaaca wadnaha
3.- Runtastic waa inaad raadisaa qalab garaaca wadnaha waana inuu muuqdaa.
Si yar ayaa loo sharaxay, laakiin haddii aad ka raadiso Google ama YouTube xaqiiqdii waad heli doontaa sida loo sameeyo
Waa yaab dijo
Waad salaaman tahay, ma leedahay saacad-saacad?
Ku jawaab Ja ier
Lili waa dijo
Waad salaaman tahay, waxaan doonayay inaan ogaado haddii mi 2 uu la jaan qaadi karo iphone marka ay timaado helitaanka ogeysiinta dalabyada kale, sida ku jirta Android, maadaama la ii sheegay in iphone-ka kooxda mi band ay awood u leedahay oo kaliya inay la socodsiiso wicitaanada iyo whatsap (si adag isagoo ka hadlaya codsiyada) Mahadsanid!
PS: fariin wanaagsan
Ku jawaab Lili pe
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado codsigeyga aan ku soo dejisto iphone-kayga si aan u isticmaali karo kooxdeyda 2. Waxaan soo dejiyey taamkeyga mana ku yimaado Isbaanish
Ku jawaab Maricuchy
Waad salaaman tahay, waad ku mahadsan tahay macluumaadka. Waxa aan jeclaan lahaa inaan ogaado waa haddii aad ka arki karto kalooriyada shaashadda jijimmada mise waa inaad aadaa abka?
Mahadsanid waxaan rajeynayaa jawaabta fadlan.
Ma jiraa barnaamij kale oo loo yaqaan 'myban2 iphone app'? Iima ogolaaneyso inaan isku xiro iyaga waan tirtiray mana ii ogolaato inaan mar kale rakibo
Waad salaaman tihiin !! Maricuchy si aad uga faalooto waxaan kuu sheegayaa haddii aad ku qori karto Isbaanish, waa inaad kaliya ku doorataa Isbaanishka Reer Mexico luqadda iPhone-ka. Sida ogeysiisyada, waxaan haystaa iPhone6 ​​oo midkoodna aniga ilama shaqeeyo. Kaliya wicitaanada. cidina iima siiso xal
Ku jawaab Nekosan
Free FileAssistant waqti xaddidan
Isbedelada DropBox: Ku wajahan goob adeeg ah